‘सा रे ग म प’बाट भारतमा भाईरल भएका नेपालका प्रितम आचार्य को हुन् ? प्रितमको बास्तविक कथा हेर्नुहोस « OSBreak
‘सा रे ग म प’बाट भारतमा भाईरल भएका नेपालका प्रितम आचार्य को हुन् ? प्रितमको बास्तविक कथा हेर्नुहोस
भारतको लोकप्रिय टेलिभिजन जी टिभि मार्फत प्रसारण हुने बाल गयान प्रतियोगिता “सा रे ग म प् लिटल च्याम्प्स” का निकै नै बलियो प्रतियोगीका रुपमा रहेका प्रितम आचार्यको चर्चा पछिल्लो समय निकै नै बढिरहेको छ । मात्र ११ वर्षका प्रितमले आफु ५ वर्षको हुदा नै थालिसकेका थिए । ५ वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा उनको गयकी मात्र हैन उनको बोलीको आत्माविश्वास र शैली नै पुरै परिवर्तन भैसकेको छ ।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका स्थित खाध्गोदम भन्ने ठाउमा बस्दै आएका प्रितम सानै उमेरदेखि निकै चर्को-चर्को स्वरमा गाउथे । जस्तो सुकै गीत पनि निकै मिठासका साथ् गाउने खुबी भएका प्रितमले इटहरी मै भएको स्कुल आइडल मा पनि भाग लिएर टप ६ सम्म पुग्न सफल भएका थिए । त्यहि बाटै उनको संगीत यात्राको थालनी भएको हो ।इटहरी मा आयोजना हुने हरेक सांगीतिक कार्यक्रममा उनको सहभागिता हुने गरेको थियो । त्यहिबाटै सबैको माया, साथ्, हौसला र प्रशंशा बाट उनि आज संगीतको महामंच सारेगमप् लिटल च्याम्प्स को टप ३० सम्म पुग्न सफल भएका हुन् ।उनी यसअघि कान्तिपुर टेलिभिजन बाट प्रशारण हुने सुरसला आइडल का उपविजेता पनि हुन् ।
इटहरीकै विश्व आदर्श स्कुलमा कक्षा ६ मा अध्यनरत प्रितम परिवारका दोश्रो सन्तान हुन् । उनकी दिदि प्रिया कक्षा १० मा यसपाली एसइइ दिदै छिन । उनि पनि इटहरी कै वाई पोइण्टिङ्ग सेकेण्डरी स्कुलमा अध्यनरत छिन । सानै उमेरदेखि संगीतमा लागेका प्रितमको परिवारमा उनका बुबा काशीनाथ आचार्य पनि निकै मिठो गाउछन ।सानैमा उनका गाउका एकजना दाजुले उनलाई रेडियो नेपालमा पनि लैजना खोजे तर उनको पारिवारिक वातावरणका कारण उनी जान पाएनन । त्यसकारण उनी जसरि भएपनि आफ्नो छोरो प्रीतमलाइ निकै ठुलो गाएक बनाउने लक्ष छ । जुन पुरा हुदै आइरहेको छ । प्रितामका वाबु काशिनाथ आचार्य इटहरीमै राहेको सिप्रदी कम्पनिमा काम गर्छन भने आमा सामान्य गृहणी हुन् ।